Cabitaanka Holland | Safarka Absolut
maruuzen | | La cusboonaysiiyay 15/04/2021 11:31 | Holland
Dhamaanteen waan isku raacsanahay in haddii aan ka fikirno Holland, aan ka fikirno beerka Heineken. Sida iska cad ma aha waxa keliya ee la cabbo ama laga cabbi karo halkan. Waxaan ula jeedaa, wax badan ayaa ka jira Heineken iyo wax badan oo ka badan biirka guud ahaan. Laakiin markaa, Sidee cabitaanku ugu jiraa Holland?
Waxaan ka hadli doonnaa taa maanta, oo ku saabsan kuwa ugu caansan uguna caansan Holland, si loo helo liis ah waxa aan isku dayi karno markaan tagno, dhamaadka cudurka ilaa iyo dhammaadka.
1 Holland iyo cabitaanadeeda dhaqameed
2 Beer ku yaal Holland
6 Eeg adigu
7 Koffie verkerd
12 Duug ah
Holland iyo cabitaanadeeda dhaqameed
Mabda 'ahaan, waa inaad taas ogaataa cabitaano badan oo dhaqameed Dutch ah waxaa ku jira aalkolo iyo in mararka qaar dhammaantood aysan dhadhamin aad u macaan ama waa waxa la sheego, xarrago leh. Ku saabsan da'da sharciga cabitaanka halkan waxaad ka cabi kartaa biirka iyo khamriga laga bilaabo 16 iyo cabitaanada ka xoog badan 18 jir.
Marka laga hadlayo cabitaanada dhaqameed waxaan tirineynaa biirka, koffie verkeed, shaaha darayga ah ama aayadda, khamriga jenever iyo khamriga kale ee caanka ah ee Dutch, chocomel, advocaat oo ay kujiraan noocyo, kopstoot, korenwijn ...
Labada nooc ee ugu caansan halkan waa Heineken iyo Amstel in kasta oo dadka deegaanku weydiistaan ​​iyaga oo si fudud u dhahaya, "pils" ama "biertje". Waxay ku saabsan tahay biir lagers cirro waana wax caan ah, laakiin sidoo kale waa run in Nederlandku ku raaxeystaan biir dhaqameed sida bokbier ama witbier.
Midka hore waa biir gaar ah oo la sameeyo guga iyo deyrta oo dhadhan fiican leh oo macaan. Dhadhanku wuu ka duwan yahay labada xilli ee sannadka, waana mid aad u kacsan oo kala-guran xilliga dayrta. Marka, hadaad tagto Amsterdam markay caleemaha dhacayaan waad ka qayb geli kartaa Bandhigga Bobkier oo iskuday.
Biirka kale, biirka loo yaqaan 'witbier beer', sidoo kale wuxuu leeyahay dhir udgoon oo macaan, laakiin waa mid aad u macaan. Nederland sida caadiga ah waxaa lagu siiyaa liin dhanaan iyo weelal si loogu burburiyo gunta muraayadda oo markaa loo soo saaro cusubkeeda iyo aashitadeeda.
Sidoo kale waxaa jira waqtiyo markii biirka loogu adeego isku darka haramahas, "gruit", oo la adeegsan jiray qarniyo ka hor waxayna gacan ka geysatay sidii loo ilaalin lahaa biirka markii aan la ogaan karin buunshada inay jirto. Waxaad ka dalban kartaa noocyadan kala duwan jopen in Haarlem, tusaale ahaan.
Runtu waxay tahay in maanta ay jiraan brewer badan oo bixiya noocyo badan oo biir ah. Waad tagi kartaa baararka ama waad booqan kartaa brewer-yada gaarka ah.
Hagaag, cabitaankani wuxuu leeyahay magaca carruurta laakiin halkan qof kastaa si siman ayuu u isticmaalaa. Maalmaha qabow waa wax iska caadi ah in la weydiiyo chocomel, magaca ganacsiga ugu caansan kan shukulaato kulul iyo nasteexo.
Xitaa waxaa jira mashiinno lagu iibiyo Chocomel makhaayadaha qaarkood iyo baararka, waxaa lagu iibiyaa dukaamada waaweyn iyo bakhaarada cuntada waxaana jira noocyo ay ka mid yihiin shukulaatada madow, oo leh kareemo ama caano dufan ah.
Hal ku dhigga sumaddu waa "de enige échte", wax la mid ah Kii ugu horreeyey iyo kan keliya. Dabcan waxaa jira waxyaabo kale, Tony Chocolon oo caano ah oo aad sidoo kale ka iibsan kartid Nederland oo dhan, iyo gaar ahaan dukaamada iibiya wax soo saarka dabiiciga ah.
Holland waxay leedahay ruuxyo badan oo mid ka mid ah kuwa ugu caansan Amsterdam waa Khamriga Wynand Fockink. Khamri kale oo caan ah ayaa ah T Nieuwe Diep. Runtu waxay tahay in khamriyeyaashu caan ku ahaayeen Holland ilaa qarnigii toddoba iyo tobnaad, da'da dahabka ah ee dhulalkaas, waqtiga kaliya ee kuwa ugu taajirsan ay awoodi karaan khamriga lagu sameeyo sokorta dibedda laga keeno, xawaashka iyo miraha.
Waqtigaas, dadka ugu faqiirsan, dadka caadiga ah, waxay cabi jireen oo keliya biirka ama jenever, laakiin ma awoodaan inay khamri cabbaan Tan iyo markaas, khamriga oo loogu adeegay muraayadaha yar-yar ee tulip-ka u eg Waxay ka buuxsamayaan ilaa qarka, sidaas darteed ma foorarsanayaan oo aad uga taxaddar. Waxaa la sheegay in loogu adeego sidan oo kale, iyadoo kudhowaad buux dhaafinaysa, maxaa yeelay ganacsatada Dutch-ka ayaa sheegay inay muraayadda ka buuxiyaan lacagtooda, sidaa darteed, fadlan, wax kasta dusheeda.
Khamriga dhaqameed ee Dutch-ka ah waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu darayo dhir udgoon ama miro, ama labadaba, cabitaanka la daadiyey ee noqon kara vodka ama abuure. Sonkor ayaa lagu daraa, isku dar ah ayaa loo ogol yahay in la karkariyo ugu yaraan hal bil natiijaduna waa dareere macaan oo leh dhadhan adag oo cad, leh khamri daran.
Mid ka mid ah dhadhanka khamriga ee ugu caansan 'duindoor', oo lagu carfiyey liinta ku baxda godadka badda Waqooyiga. Sidoo kale waxaa jira khamriyo leh cherry ama liin, sida qadiimiga Talyaani ee loo yaqaan lemoncello.
Xagga sare, munaasabadda ka hadalka khamriga, waxaan ka soo hadalnay jenever, Nooca Nederlandka ee gin Ingiriis ah. Taariikhda ayaa sheegeysa in Jenenever ay cuneen askartii Holland intii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Spain iyo England 1630. Waxay u maleynayeen inay cabbeen dagaalka ka hor oo ay la wadaageen xulufadooda Ingriiska.
Markii ay askarta Ingriiska ku laabteen dalkooda waxay la yimaadeen cunto karinta "Dutch Courage", maadaama la baabtiisay. Umay guuleysan sidii hore, dhadhanku sidii hore iskuma uusan sii ahaan jirin, sidaa darteed waxay ku dareen xoogaa dhir ah iyo dhir udgoon si ay uga dhigto mid "la cabi karo" waana halka ay ku kala duwan yihiin farqiga u dhexeeya geedaha Ingiriisiga geedka iyo geedka Dutch.
Jenever Waxaa lagu sameeyaa kala-goynta miraha iyo ku dhadhamista miraha geedka canabka ah, iyo mararka qaar noocyada qaar oo loo isticmaalo sameynta liqueurs. Maaddaama dekedda Rotterdam loo isticmaali jiray in laga soo dejiyo miraha dhammaan xaafadaha ku hareeraysan, aagga Schiedam, tusaale ahaan, waxaa ku noolaa dijitaallo jenever ah welina waa la arki karaa maanta.
hay qaababka kala duwan ee jenever: oude iyo joonge. Farqiga u dhaxeyn maayo waqtiga ay u harsan yihiin inay cunteeyaan laakiin waxay ku jirtaa qaabkooda. Oude jenever-ka waxaa lagu sameeyaa cunto karis duug ah, halka jonge-ku yahay qaab cusub. Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka barato sheekadan, waad booqan kartaa Guryaha Bols ee ku yaal Amsterdam, ama Matxafka Jenever, oo ku yaal Schiedam.
Waxaan ka soo baxnaa cabitaannada aalkolada ah xoogaa oo waxaan aadeynaa shaah. Tani waa a shaah reexaanta cusub taas oo dhaqan ku leh Holland aadna loogu cabo gees kasta oo Amsterdam ah. Shaaha waxaa lagu siiyaa koob dhalo ah ama mug weyn, oo leh biyo kulul iyo in yar oo ka mid ah caleenta shaaha.
Waxaad ku dari kartaa malab iyo liin goyn waana ikhtiyaar fudud haddii aadan dareemeyn sida qaxwo ama aad rabto wax dheefshiidka ka sii badan.
Laga soo bilaabo shaaha ilaa kafeega waxaa jira hal talaabo oo kaliya. Hadaad jeceshahay isku darka kafee leh caano markaa kafeekan Dutch-ka ah adiga ayaa laguugu talagalay. Waa nooca Nederlandka ah ee loo yaqaan 'caffè latte' ama kafeega au lait ama kafee caano leh. Qaxwada caanaha kulul ee badanaa lagu sameeyo espresso oo saldhig u ah caanaha uumiga lagu daro si ay uga dhigto xumbo. Farxad leh.
Magaca, koffie verkeerd, macnaheedu waa kafee khaldanSababtoo ah kafee caadi ah ayaa dhibic caano ah leh. Waxa caadiga ah waa in la dalbadaa noocyadan subixii ama galabtii, in kasta oo ay jiraan kuwa u caba qadhaadh, kuwa kale waxay ku daraan xabbad sonkor ah. Makhaayadaha ama baararka waxaa lagu cunaa buskud ama cookie sida wehel.
Waxaan u laabaneynaa cabitaanka khamriga. Cabitaankan ayaa laga sameeyay ukunta, sonkorta iyo khamriga. Natiijadu waa cabitaan dahab ah oo u adeega sidii saldhig u ah sameynta is biirsaday iyo macmacaan badan.
Mid ka mid ah is biirsadayda ugu caansan ee lagu sameeyo advocaat waa barafka: halkan badh iyo badh ayaa lagu qasay liinta. Haa, isla sidaas ayaa looga adeegaa England, laakiin halkan Holland waxaa badanaa loogu adeegaa jajab labeen kareem ah iyo budada kookaha.
Ereyga, advocaat, macnahiisu waa garyaqaan mana aha wax iska yimid. Sheekada ka dambaysa cabitaanku waxay sheegaysaa in advocaat ama advocatenborrel loo adeegsaday kuwa ay ahayd inay meel fagaare ah kala hadlaan kahor cunaha saliiddooda. Yuu ka hadlayaa fagaaraha? Qareenada.
Cabitaankan waxaa laga heli karaa dhammaan dukaamada khamriga ee Dutchka ama baararka, xitaa makhaayadaha ama makhaayadaha. Yaan lagu jahwareerin jenever. Cabitaankani wuxuu ka samaysan yahay badar, laakiin wuxuu kaga duwan yahay jenever-ka adeegsada berry juniper, berry-yadaas halkan kuma jiraan Marka, dhadhanka ayaa aad u kala duwan.
Guud ahaan, korenwijn waxaa loogu adeegay cunto dhaqameed Nederland ah, Tusaale ahaan, isaga dhaqashada (Cunnada kalluunka).
Waa lala barbar dhigi karaa kariyaha Ingiriiska. Laba koob ayaa la bixiyaa, mid ka mid ah biirka iyo mid ka mid dhalaalaya. Marka hore jiinjiraha ayaa sakhraansan, hal xabbo, ka dibna biirka si loo dejiyo gubashada kan hore.
Madadaalo iyo xamaasad badan oo Dutch ah, haddii aad rabto inaad la kulanto a 100% khibrad qaran.
Ma aha wax kale oo aan ahayn cabitaanka liinta ah ayaa ka muuqda dabaaldegyada qaran, sida Maalinta King ama ciyaaraha kubbadda cagta ama Maalinta Xorriyadda. Waa a khamri aad u xoog badan, oo leh 30% aalkolo, waxaana badanaa lagu qaataa a shot.
Oranjebitter waa qadhaadh oo xoog badan yahay, waxaa lagu sameeyaa astaamaha, liinta iyo diirka liinta. Waxay la mid tahay khamriga liimiga ah ee caadiga ah laakiin khamriga ayaa ku jira sonkor. Waa in la yiraahdaa maanta dhaladaha Oranjbitter badankood waxay leeyihiin sonkor, sidaa darteed hadda ma ahan soooo qadhaadh.
In kasta oo ay leedahay magac Faransiis ah, haddana cabitaanku waa Dutch. Waa khamri, ah Nooca Dutch-ka ee qadiimiga ah cognac. Markii hore waxaa loogu yeeri jiray si lamid ah walaalkiis Faransiis ah, laakiin 60-yadii nambarkii Faransiiska ayaa helay magaca asalka ka dibna magaca waa in la beddelo
Cabitaan caan ah ayaa ah in lagu qaso Coca-Cola, in kasta oo aynaan ilaawin taas waxay leedahay khamri badan, qiyaastii 35%. Khamri aad u xoog badan ayaa ah Goldstrike, oo leh aalkolo 50% ah.
Ilaa hadda, qaar ka mid ah cabitaanka Holland laakiin dabcan wax badan ayaa jira. Safarkaaga xiga ee Nederland, xidho ilaaliyaha beerka iyo…. inaad ku raaxaysato!
GastronomyWaqtiyada firaaqadaMakhaayadaha iyo baararka
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cabitaanka Holland
Maxay yihiin dhirta ugu badan ee Hindiya laga isticmaalo?
Matxafyada ugu wanaagsan ee Ameerika